BARADHO "GALA": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA BEERAHA IYO BEERAHA - BARADHADA
Sida loo beero noocyo baradho ah "Gala" aaggooda
Marka aad doorato noocyo baradho ah oo loogu talagalay beeritaanka, waxaa muhiim ah in aad si taxadar leh u bixiso taxadarka, dhalidda, is-difaaca cudurada, iyo sidoo kale tayada dhadhanka ah ee geedkan caanka ah.
Taariikhda noocyada taranta ee baradho "Gala"
Baradho "Gala" waa noocyo kala duwan oo dhallinyaro ah, waxaa la soo saaray Jarmalka bilowgii qarnigii 21I. Horumarka beeraha jarmalka ayaa caan ah oo aan ahayn guriga, laakiin sidoo kale dalalka kale. Tusaale ahaan, Russia ayaa baradhadaas ka diiwaangashan Diiwaanka Gobolka 2008, waxaana inta badan lagu isticmaalaa gobollada bartamaha iyo waqooyiga.
Ma taqaanaa? Baradhada kala duwan ee "Gala" waxaa ku jira xaddi yar oo istaarijin ah - keliya 11-13%.
Qeexida astaamaha baradho "Gala"
Sida laga soo xigtay sharaxaad ka ah wakhtiga Bisaylkiisa ee "Gala" kala duwan baradho, waa noocyo hore bislaado. Bisaylka buuxa ee digriiga horey u dhacaan 65-70 maalmood ka dib markii laga beerto.
Wax-soosaarka baradho "Gala" - qiyaastii 25 miro oo ka mid ah baadiyaha.
Buundada waxa ay gaartaa dherer dhexdhexaad ah, faafin dhexdhexaad ah, midabka ubaxa iyo caleemaha cagaaran yahay. Caleemaha waa kuwo waaweyn, yar yar oo qallafsan, ubax - caddaan, qiyaas dhexdhexaad ah. Qaababka digriiga waa wareegsan ama oval, diirka waa huruud. Cabbirka celceliska waa 7-8 cm oo dherer ah iyo qiyaastii 5 cm gudaha ballaaran. Miisaanka hal kabuub waa 100-120 g. Hilibka baradku waa hurdi ama iftiin huruud ah, wuxuu leeyahay qaab dhismeedka cufan.
Daaweynta kuleylku ma keenayso burburinta qaabkan, sidaa darteed, markaad wax karineyso, baradhadu ma kari karaan jilicsan ama madow. Tayada sifaha baradhada "Gala" waa heer sare.
Xulashada iyo diyaarinta goobta loogu talagalay baradhada
Dhulka beeritaanka baradho ee "Gala" kala duwan ayaa ka wanaagsan in la doorto aagag dabiici ah oo leh nalal wanaagsan iyo biyo dhulka oo qoto dheer oo ku saabsan 150 cm.
Waa muhiim! Meelaha hareerihiisa aan u oggolaaneynin inay koraan digriiga baradhada waaweyn.
Waa mid la aqbali karo in la isticmaalo boodhka dhoobada ama ciidda ciidda loogu talagalay beerto Gala baradhada, laakiin tani waxay u baahan tahay diyaarinta hordhaca ah. Waxtarka ugu wanaagsan ee tayada wanaagsan ee digriiga waa la gaari doonaa marka la dooranayo carrada madow, peat, carrada iyo loamy carradu.
Cudurka dabiiciga ah ee ciidda waa inuu ahaado mid hooseeya si ay baradho u adkeyso cudurada. Calaamadaha carro noocan oo kale ah waa koritaanka chamomile, dhirta, coltsfoot ama løndelion on. Xilliga dayrta ka dib goynta waxaa lagama maarmaan ah si loo diyaariyo ciidda baradho beerto guga. Goobtu waxay u baahan tahay in la xoqdo si qoto dheer ah 10-30 cm, soo bandhigida habka 1 mitir oo laba jibbaaran oo ah 5-7 kg oo ah compost ama humus, oo ku saabsan 40 g of superphosphate, 15 g of potassium sulfate.
Ma taqaanaa? Halabuurka baradho ee noocyada kala duwan waxaa ka mid ah fitamiin C, borotiinka, carotene, potassium - tani waxay suurtogal u tahay in ay tixgeliso faa'iido iyo cunto.
Haddii ciidda ay leedahay heer sare oo ah kiimiko, kadib 5 sano oo kasta, qiyaastii 0.5 kg jees mindhicirka waa in lagu daraa 1 mitir oo laba jibbaaran.
Horeba gu'gii, goobta waa in mar labaad lagu qodbo heer isku mid ah sida dayrta. Tani waa in la sameeyaa ka dib marka ciidda ku dillaacdo, si ay qaabkeeda u noqoto mid isku mid ah. Iyadoo la socota geeddi-socodkan oo ku saabsan 20 g oo amooniyam ah ayaa lagu soo bandhigayaa halkii mitir oo labajibbaaran. In ciidda clayey ama ciidda waxaad u baahan tahay inaad baaldi of humus ama peat sidoo kale 1 mitir oo laba jibbaaran.
Waa muhiim! Doorashada waqtiga loo beerto waxaa lagu go'aamiyaa heerkulka ciidda - waa inay noqotaa ilaa 10 °C.
Shuruudaha baradho beereedka "Gala" - dhammaadka Abriil iyo bilowga Maajo.
Xaalad muhiim u ah sii kordhinta dalagyada wanaagsan ee baradhada Gala ayaa diyaarinaya digriiga beeritaanka. Waa lagama maarmaan in la doorto digriiga yaryar oo aan wax dhaawac ah iyo kallana, oo miisaankeedu yahay 100 g. Waxaa fiican in la isticmaalo xididada, kaas oo koray baadiyaha oo leh dhalidda ugu sareeya.
Ma taqaanaa? Beeraha barafka ee dhulka ayaa kuu ogolaanaya inaad hesho goosashada ugu horreysa.
Digriiga waa la kala qaybin karaa qaybo dhowr ah haddii ay lagama maarmaan tahay sababtoo ah yaraanta qalabka beeritaanka ama cabbirka weyn ee digriiga. Isla mar ahaantaana waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka qaarkood:
Qalabka loo isticmaalo in lagu yareeyo digriiga waa in loo baahan yahay in laga baaraandego 5% oo ah copper sulfate si looga hortago caabuqa.
Jarida waa in ay dhacdaa oo keliya qaaxada.
Qayb kasta oo ka mid ah walxaha beerto la diyaariyey waa inay noqdaan 2-3 qaybood.
Inta badan, diyaarinta baradho ah ee beerto, hababka sida biqilka qoyan iyo qallalan ayaa loo isticmaalaa.
Nuxurka habka ugu horreeya waa sida soo socota: xididdada ayaa u baahan in la geliyo sanduuqyada iyo daboolay peat qoyan ama humus. Foomkan, digriiga waa inay ahaataa hal bil, heerkulka qolka waxaa loo baahan yahay 15 ° C.
Akhri liistada daroogooyinka oo kugu caawin kara daryeelka beerta, sida "Inta badan-vir", biohumus, "Fundazol", Hetero-auxin, "Bud", boric acid, "Prestige", "Taboo", "Lapis" "Hom".
Cagaarshka qalalan wuxuu ka kooban yahay xididada bacaha balaastigga ah, oo aad u baahan tahay in aad sameysid meelo dhowr ah. Heerkulka qolka waa inuu ahaadaa heerka 20 ° S, waqtiga ilaalinta waa inuu ahaado 30-40 maalmood, ilaa baradhadu ku helaan midab cagaaran.
Waxaad dooran kartaa hab kale oo loo diyaariyo baradho, waxaa loo yaqaanaa - adkaanta. Qeybta hoose ayaa ah in digriinku u baahan yahay in la gooyo lakabka keliya ee qolka meesha heerkulku yahay qiyaastii 16-18 ° C. Beeridda waa in la sameeyaa kaddib marka uu sprouts soo muuqdo, tani waxay ku dhici doontaa 10-20 maalmood.
Marxaladda qasabka ah ee diyaarinta digirta baradho beereedka waa daaweyntooda ayadoo loo diyaar garoobayo diyaar garow gaar ah si looga hortago caabuqyada fangas. Si aad tan u sameyso, isticmaal qalabka sida qiyaasta nuska saac gudaheeda xal "Taboo" ama "Maxim". Diyaari xalka daawada sida ku qoran tilmaamaha.
Qaabka beeritaanka baradhada: qoto dheer iyo masaafada u dhexaysa godadka
Digriiga baradho ayaa lagu beeray qoryaha diyaarka ah, qoto dheer oo ah 10 cm, masaafada u dhaxaysa waa 50 cm, isla mar ahaantaana, inta u dhexeysa 80-90 cm waa in laga tagaa inta u dhaxeysa safafka, godadka waa in laga dhigaa waqooyiga ilaa koonfureed. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa mishiinka ash ama qoryaha qoryaha ah bacrimin dheeraad ah, oo ku ridaya ceel kasta. Ku rid tuber u baahan sprouts, iyo haddii la googooyo, ka dibna u dhig meesha lagama yareeyo. Ka dib markaa, godadka waxaa lagu daboolay dhulka, oo la waraabiyey 1 litir oo biyo ah halkii baadiyaha, ka dibna dhulka kor u qaad.
Daryeelka iyo beerista baradho "Gala"
Ka dib markii ay beerto "Gala" baradho, waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah si ay warshadu u horumariso si haboon una soo saarto dalag tayo leh.
Waa muhiim! Kala duwanaanta baradhada "Gala" waxay u adkaysantaa abaarta, sidaas awgeed waraabinta ayaa ka hortageysa.
Fogaanta badan ee waraabka
Waraabinta waxaa la fuliyaa ugu yaraan saddex jeer xilli, haddii roobabku caadi yihiin. Haddii xaaladaha cimiladaadu aanay daboolin xaaladdan, tirada biyuhu waxay kordhi doonaan si waafaqsan. Waqtiga ugu fiican ee barafka lagu qoyo waa subaxda ama fiidka.
Inta lagu jiro baradhada ubaxyada gaar ahaan u baahan tahay waraabinta saxda ah, sariirta waa in aysan aheyn kuwo qalalan waqtigaan.
Waraabinta ugu horeysa waa in la fuliyaa marka geedo baradho u koraan 4-5 cm. Biyaha waa in lagu shubaa dhexda baadiyaha, isticmaalka - ugu yaraan 3 litir oo baadiyaha ah. Warshad qaangaar ah ayaa ku gubta biyo badan - qiyaastii 8-10 litir inta lagu jiro muddada ubaxu dhacayo, ka dibna waxaa la socda 7 litir.
Haddii xagaaga ay kululaato, markaa inta jeer ee lagu waraabiyo waraabinta ilaa 1 ilaa 4-5 maalmood, cimilada qaboobaha waxaa loola jeedaa in mid ka mid ah waraabinta 10 maalmood uu ku filan yahay.
Goobta aagga baradho waxay istaagaysaa 10 maalmood ka hor goosashada.
Waa muhiim! Haddii ciidda la qalajiyey si qoto dheer oo ku saabsan 7 cm, dhirta u baahan tahay waraabinta.
Nidaamka asaasiga ah ee baradhadu waxay u baahan yihiin helitaanka joogtada ah ee hawada, sidaa daraadeed, waxaa muhiim u ah dhirta si loo dabciyo ciidda.
Marka ugu horeysa ee habkan loo qabto waa 5 maalmood ka dib markaad degto. Si loo dabciyo ciidda agagaarka duurka waa lagama maarmaan mar kasta inta lagu jiro samaynta dalagga dhulka. Baradhada cagaaran ayaa sidoo kale muhiim ah in laga takhaluso haramaha kaas oo caqabad ku ah horumarka dhirta. Warshadda gala "Gala" kala duwan waxay u xidhmaysaa hal rooga oo si dhakhso ah, illaa heerkan waa lagama maarmaan in laga saaro cawska sida ay u muuqdaan.
Si loo ilaaliyo baradhada sii kordheysa ee ka timaadda isbeddelka heerkulka, hilling ayaa la sameeyaa. Waqtiga ugu habboon ee nidaamkaan waxaa loo tixgeliyaa subaxa hore. Haddii uu roobku horey u da'ay ama uu ku jiray baradho, ka dibna aad bay faa'iido u tahay dhirta.
Ka hor inta geedo baradho biqlo foomka a rooga, hilling waa lagama maarmaan in la sameeyo laba jeer - marka afkoda u gaaro 10-12 cm (waxay si buuxda u dabooli kartaa dhulka), iyo ka dib markii in ka dib 2-3 todobaad. Warshadu waxay horey u gaari doontaa dhererka 40 cm.Waxaa isla markaas abuuraya tareeraha qiyaastii 30 cm ee dhererka.
Noocyada baradhada "Gala" waxay u baahan tahay laba ama saddex siyaado ah xilliga oo dhan. Warshadu waxay si wanaagsan ugu jawaabeysaa macdanta iyo macdanta organic.
Bacriminta oo ku jira nitrogen (tusaale ahaan, ammonium sulfate, amooniyam) ayaa lagu dabaqayaa hillkii ugu horeeyay ee heerka 15-20 g halkii mitir. Waxaad ku dari kartaa 10 litir oo biyo ah. Isla mar ahaantaana hal litir ayaa lagu isticmaalaa hal baadiyaha.
Waa muhiim! Marka bacarimiso, waxaa muhiim ah in la hubiyo in dhaymada dareeraha aysan ku dhicin caleemaha. Haddii ay taasi dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad warshadda ku dhaqdo biyo.
Qeybta labaad waa in lagu daraa hirgelinta bacriminta adag ee baradhada ama xal of superphosphate, potassium sulfate (20 g halkii 5 litir oo biyo ah). Waxa kale oo aad isticmaali kartaa faleebo qoryo alwaax ah 10 litir oo biyo ah - 0.5 kg. Qalabka adag ee fosfooraska-potassium ayaa lagu soo bandhigay dhammaadka dhismaha digriiga (2 bilood kadib beeritaanka).
Haddii ay dhacdo koritaanka saboolka ah, waxaa lagu talinayaa in la bakeeriyo biyo xal (1:10) laga bilaabo galiyey digada cusub (diyaarisay 3-4 maalmood).
Cunto baradho ah ee Gala si cuduro iyo cayayaanka
Kala duwanaanshaha baradho waa mid u adkaysata cudurada sida kansarka baradhada, nematodes. Si kastaba ha ahaatee, dhirta ayaa u nugul rhizoctoniosis. Cudurkani waa fungal dabiiciga ah, wuxuu saameeyaa qaybta hoose ee stem iyo nidaamka xidid baradho ah.
Habka ugu fiican ee looga hortagi karo cudurka waa ka hortagga, gaar ahaan - daawaynta afkoda leh diyaargarow gaar ah. Waxa suurtogal ah in lagu shaqeeyo digriiga leh boric acid ka hor inta aan la beeri. Sidoo kale, "Gala" kala duwan ayaa leh fayruuska caleenta caleenta ee caleemaha iyo digriiga. Miraha baadiyaha waa la cuni karaa, laakiin abuurka baradhada goosashada way wanaagsan tahay in aanad isticmaalin.
Baro wax badan oo ku saabsan sii kordhaya yaanyada kiniisiga ah, toonta, basbaaska yar yar, lagenaria, xididdo sonkorta ah, dill, malayga.
Goynta iyo kaydinta dalagga
Goosashada baradhada "Gala" oo ku dhowaad 70 cisho, sidaa daraadeed goobaha koonfureed waxaa jira fursado ah in la ururiyo laba ama seddex dal oo dalag ah, oo ka yimaada hal baadiyaha ilaa 25 digriiga.
Badbaadinta dalagyada xididka ah waa la hagaajin karaa, tanina waxaad u baahan tahay 10 maalmood ka hor intaadan qorshaynin inaad beerato, gabi ahaanba ka saar daboolka geedka. Natiijo ahaan, muuqaalka iyo dhadhanka baradhada Gala waxay socon doonaan illaa guga. Fiirinta noocyada kala duwan waa mid adag, kaas oo ka caawin doona gaadiidka wanaagsan. Ka hor inta aan la kaydin, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo digriiga baradho leh xalalka "Maxim" ama "Baktofit" sida waafaqsan tilmaamaha. Tani waxay lagama maarmaan u tahay ka-hortagga cudurrada iyo faafitaanka.
Kaydinta ugu wanaagsan waxaa lagu sameeyaa qoyaan ah qiyaastii 90% iyo heerkulba 0 ilaa 7 ° C.
Waa muhiim! Heerkulka ugu fiicani waa 0 ilaa 2 °C, haddii ay hoos u dhacdo, markaa baradho way ka fiican tahay daboolka.
Geli baradhada Maqaasiinka ama qaybta hoose ee sanduuqyada leh hawo wanaagsan ama bacaha. Waxaad sidoo kale ku keydsan kartaa digriiga.
In la ogaado waxyaabaha gaarka ah ee "Gala" baradho kala duwan iyo sidii si habboon loo daryeeli lahaa, waxaad awoodi doontaa inaad kobciso dalag fiican. Warshad Tani waxay u adkaysato cudurada iyo uma baahna waqti badan inta lagu jiro beerashada, taas oo ah sababta ay u beertay noocyo kala duwan.